Matipi manomwe ekudyara mari yako Zvakachengeteka | Ehupfumi Zvemari
Matipi manomwe ekudyara mari yako zvakanaka
Kuchengetedza ndeimwe yemaitiro anonyanya kudikanwa nevashambadzi vadiki nepakati. Kuedza kuvimbisa yako yekuchengetedza uye tora kudzoka pane mashandiro. Nekudaro, chengetedzo mumakambani yakanyanya kunetsa kuwana nekuda kwehunyanzvi. features yemisika yemari iyi. Izvo hazvigone kukanganikwa kuti akasiyana mareti emhando haavimbise chero kudzoka. Kusiyana nezvinoitika kune zvakagadziriswa zviwanikwa zvemari zvinogadzira chimbadzo kubva pakutanga.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, chimwe chezvinangwa zvako zvikuru chichava kupinza chengetedzo huru kune ese mashandiro auchazoita kubva zvino zvichienda mberi. Muzviitiko zvese, zvinoda kuwedzera mukurairwa kwekushanda uye kunyangwe shanduko zano mukudyara. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri muchimiro chiri nani chekuchengetedza mari yako nenzira inoshanda. Pasina kuregeredza mabhenefiti aunogona kuwana mune ako ese mashandiro.
Chero zvazvingaitika, kuchengetedzeka mukushanda mumisika yezvemari kunowanzo kuve kwakajairika kana nzira dzako dzekudyara dzichiuya dzichichengetedza kana kudzivirira. Iko pasina kupokana kuchengetedzeka kuchakunda kupfuura zvimwe zviito. Icho chinhu chakanakira icho icho zvakare chinokubatsira iwe kuchengetedza ako ekuchengetedza mune imwe nzira inobatsira. Kukurudzira kuti pakupedzisira kurasikirwa ndiko kushoma kunogoneka. Kuti basa iri rive rechokwadi, hapana zvirinani kupfuura zano rimwe chete raunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi.
1 Inozivikanwa Chigadzirwa Chengetedzo
2 Chechipiri kiyi: tsanangura nguva dzakatarwa
3 Chechitatu kiyi: usaise mari zvese
4 Kiyi yechina: tora iyo nguva
5 Chechishanu kiyi: gara kure nehupfu
6 Kiyi yechitanhatu: sangana pamwe nezvimwe zvinhu
7 Yechinomwe kiyi: zviite iwe pachako kuti kurairwa
Inozivikanwa Chigadzirwa Chengetedzo
Hapana imwe nzira irinani yekupa chengetedzo yakakura kupfuura yekudyara mari yako muzvigadzirwa zvemari zvaunonyanya kushandisa kushanda. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti iwe unozogona kuziva kuti zvii makanika uye njodzi dzazvinosanganisira nguva dzose. Uye zvakare, iwe unenge uine mukana mukuru wekupinda nekubuda mumisika nekuziva mafambiro ehupfumi hwemari Kusiyana nezvimwe zvakateedzana zvezvigadzirwa zvausingatomboziva iwo maitiro avo. Kupi zvichave nyore kwazvo kwauri kuti utadze mune sarudzo dzakaitwa kubva zvino zvichienda mberi.
Icho hachisi chakavanzika kuti kutengesa pane zvakakurumbira zvigadzirwa kuchakubatsira iwe kugadzirisa mashandiro. Kana iwe usiri kuda zvimwe zvinoshamisira kubva zvino zvichienda mberi hauzove nesarudzo asi tarisa pane anozivikanwa ekudyara mamodheru. Sevha zviyero zveimwe nguva zvinonyanya kunakira zvaunofarira. Nekuti izvo zvazviri ndezvekutora yako yekutarisa account balance kuti ikure gore negore. Pasina kuyedza kumhanyisa mashandiro chero nguva.
Chechipiri kiyi: tsanangura nguva dzakatarwa
Zvinenge zvichinyanya kukosha kuti iwe uve nezvinangwa zvakanyatsotsanangurwa zvine chekuita nezve nguva dzekusingaperi dzeako equity mashandiro. Iri zano richakubatsira iwe kutengesa kwakaipa kunoderedzwa semhedzisiro yemari yako yaunoda. Kazhinji kutarisana nemari isingatarisirwi uye izvo zvinogona kukutungamira kuti urasikirwe nemari yakawanda mune yega yega mashandiro. Izvo hazvina basa kana ipfupi, iri pakati kana yakareba sezvo chakakosha chinhu ndechekuti iwe unonyatso kujekesa nezve idzi nguva.
Kana iwe ukashandisa iyi nzira, hapana mubvunzo kuti iwe uchave nekuchengeteka kwakawanda mukuchengetedza kwako kusevha. Kune rimwe divi, zvinoenderana neshanduko yakakosha iyi iwe uchave uine akakodzera maitiro kune ino hunhu mukudyara. Nekuti zvirizvo, pane zvimwe zvirevo pamusika wemasheya izvo zvingave zvinonyanya kubatsira kunguva pfupi uye zvimwe kwenguva refu. Usaite chikanganiso chakakomba chekuvhiringidza kutora kwako kwemasheya zvichienderana nekuti uchafanirwa kumirira kupera kwenguva zvakadii.
Chechitatu kiyi: usaise mari zvese
Imwe yemaitiro anonyanya kushanda ndeyekudyara chikamu chemasefa ako chiripo cherudzi urwu rwekushanda mumisika yemari. Nenzira iyi, iwe uchave kudzikisira kurasikirwa kunogona kuitika izvo zvinogona kugadzirwa kubva kune aya mashandiro. Kana iri makumi mana muzana yemari iyi, ichave inopfuura yakaringana kuvimbisa marudzi ese ekufambisa mumisika yemari. Uye zvakare, zvichave zvinobatsira kwazvo kuchengetedza huwandu hwemari mune yako yekutarisa account.
Ehezve, mimwe mipiro yezano iri ndeyekuti ichakutendera iwe kushingairira tsvaga mikana yebhizinesi izvo zvinogara zvichigadzirwa kubva mumisika yemari iyi. Iko kwaunongoda kumirira kuti nguva iuye uye zvinogona kutora mwedzi yakati wandei kana kunyangwe makore kuti mamiriro aya aitike. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti iwe uchagara wakadzikama mune ino mamiriro. Nekuti iwe unenge uine shoma dambudziko kubhadhara yemhuri zvikwereti, chikoro chevana kana kungo sangana nemitero yako zvisungo.
Kiyi yechina: tora iyo nguva
Iwe haufanire kuisa mari nguva dzese, kure nazvo. Asi pane zvinopesana, iwe unofanirwa kutarisa kune anonyanya kubatsira nguva emisika yemari. Semuyenzaniso, mune yepamusoro maitiro kana iyo yekudyara modhi yakasarudzwa iri yemusika wemusika. Misiyano yekuita oparesheni kubva kune imwe mamiriro kuenda kune imwe inogona kuve yakakosha. Zvakafanana nekuita kuti iwe ufunge kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti iwe hausungirwe kuisa mari yako mune zvese zviitiko. Pane zvinopesana, iwe unofanirwa kuve wakasarudzika mukutsvaga kwako mikana.
Neiyi nzira, mune yekusimudzira mafambiro iwe uchafanirwa kuve wakanyanya kutwasuka kupfuura mune e-bearish iwo kana kunyangwe gare gare Mupfungwa iyi, zvinobatsira kwazvo kuongorora kuti mamiriro azvino emisika yemari. Kusvika padanho rekuti iwe unowana imwe inogona kuve yakanyanya kunetsekana kugamuchira yako yemari mipiro. Zvisinei nezvinangwa zvako chaizvo nguva dzose. Unofanira kudzidza kubva zvino zvichienda mberi kuti nguva imwe neimwe inoda nzira dzakasiyana pachikamu chako.
Chechishanu kiyi: gara kure nehupfu
Kana iwe uchida kuwedzera kuchengetedzeka kwemari yako, iwe unozomanikidzwa kutiza kubva kune chero mhando yezvinhu zvine chepfu zvigadzirwa. Izvo hazvina basa kuti hukama hwako nenyika yemari ichengetedzwe. Kune rimwe divi, ndiyo nzira ine njodzi kwazvo yekukusiira maeuro akawanda munzira. Kunyanya, kana iwe usina tsika yemari sekushanda neaya mafomati ane njodzi kudzivirira zvaunofarira. Kwete pasina, iyo equation iyo inosimbiswa pakati penjodzi uye kudzoka mukuita haina kubatsira.
Zvakare zvigadzirwa zvine chepfu zvinogona kukukonzera kanopfuura dambudziko rimwe panguva yausingade. Funga kuti iwe uchave nezvakaringana neako mashandiro mune zvakajairika misika yequity. Semuenzaniso, kuburikidza nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya kana kuburikidza Investment funds. Iko kwausingazove nechero vimbiso maererano neicho chimbadzo icho mashandiro acho achazivisa. Izvo hazvigone kuvimbiswa nechero equity chigadzirwa, kunyangwe kunyanyo chengetedza.
Kiyi yechitanhatu: sangana pamwe nezvimwe zvinhu
Iyi ndeimwe yemaitiro ekupa chengetedzo kune yako yekuchengetedza hupenyu. Inosanganisira kusanganisa kuchengetedza pamwe nezvimwe zvinhu zvemari kubva pamari yakatarwa. Nechiito ichi iwe unozowona kuti njodzi dzakadzikira zvakanyanya. Kuti uzo zvinokudzivirira kubva pazviitiko zvishoma yemisika yemari. Iwe unodzora kurasikirwa pane dzimwe nguva izvo zvinokuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira semudiki uye wepakati investor. Kunyangwe pane imwe nhanho kana imwe iwe unenge uri mune zvakakunda kuwana mamiriro.
Iwe haugone kukanganwa kuti kuita kwekudyara uku kunopa iwe nekudzoka kushoma pane chikamu chemipiro yako yezvemari. Kurwisa zvakashata mhedzisiro yemitengo iri kutara misika yemari. Chinangwa chaunofanira kuteedzera ndeche gadzirisa chiyero chemari mbiri idzi. Imwe yekiyi yekuzadzisa izvi zvinoenderana nekupa imwe mari kune rimwe zano kana imwe, zvinoenderana neprofile yaunopa sevatengesi vevatengesi. Chinhu chisiri nyore nguva zhinji. Kwete kunyange kana iwe uine ruzivo rwakakura murudzi urwu rwekushanda.
Yechinomwe kiyi: zviite iwe pachako kuti kurairwa
Kushandisa kana kukumbira masevhisi emakambani emari inyanzvi izano rakanaka rinogona kukupa chengetedzo huru mune ako mazhinji mashandiro. Ivo vanozoziva nguva dzese mune zvemari midziyo yaunofanirwa kuisa mari yako. Kuburikidza ne kushingaira manejimendi iyo inozoenderana nekutora mukana wezviitiko zvese zvinogadzirwa kubva kumisika dzakasiyana dzemari, zvine musoro zvinosanganisira musika wemasheya. Iwe unogona kuhaya sevhisi kubva kubhangi rako rakajairwa kuburikidza nekuongorora kwayo uye nemadhipatimendi eku maneja makuru.
Kune rimwe divi, ivo vanokupa yakawandisa zano pane iwe yausingakwanise kuwana wega. Pamusoro pekuve inoshanda manejimendi, ichave zvakare inochinjika. Zvikurukuru nekuti zvichave yakashandurwa nenzira dzakasiyana dzekudyara. Kwete chete kubva muhombodo, asi kubva kune zvishoma zvinotarisirwa zvigadzirwa pane yako chikamu. Idzi nyanzvi dzichaedza kugadzirisa kudzoka kwako, asi pamusoro pezvose kubva padanho rekudzivirira pamusoro pezvinhu zvakapihwa. Izvi ndizvo zvinonzi mari yakapihwa, uye inowanzo shandiswa kune inowedzera inoda mari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Matipi manomwe ekudyara mari yako zvakanaka
Smart Investor Mitemo